Askari dhaawacay magan-galyo doon Soomaali ah oo dacwad lagu soo oogay
Cabdiraxmaan Cabdullaahi Xamza ayaa dhaawaciisa waxaa lagu sheegay mid sahlan.
VALLETTA, Malta – Askari kamid ah ciidamada ammaanka Malta ayaa lagu soo oogay dacwad kadib markii uu dhaawacmay magan-galyo doon Soomaali ah kaasoo kamid ahaa 27 kale oo isku dayday in ay baxsato.
Darren Bonello oo kamid ahaa ilaalada xerada qaxootiga lagu hayo ee Safi ayaa la sheegay in uu rasaas ku furay muhaajiriinta markii ay Jimcadii isku dayeen in ay ka fakadaan xaruntaas oo lagu hayey sanadihii dambe.
30-jirkan maxkamad lasoo taagay, si KMG ahna hubka loo dhigay ayaa si gaar ah loogu eedeeyay in uu jebiyey shuruudaha isticmaalka qoryaha iyo in uu goob fagaare ah hub ku dhex-qaatay ogolaanshiyo la'aan.
Eedeysnaha oo ku adkeystay in uusan dambi gelin ayaa helay dalab damaanad lacageed ah taasoo qareenkiisa uu u gudbiyey xeer-beegtada.
Cabdiraxmaan Cabdullaahi Xamza oo ah Soomaaliga ku dhaawacmay xabada uu ganna askariga ayaa dhaawaciisa lagu qeexay mid sahlan, waxaana dib loosoo qabtay kooxdii kale ee ku wehlisay baxsashadda.
Badankooda oo kasoo kala jeeda Soomaaliya, Sudaan iyo Eritrea ayaa haatan xabsi ku jira iyagoo wajahaya dacwad ku aadan isku day fakasho, waxaana maxkamadda ay ka diidey codsi ku saabsanaa damaanad kusii deyn.
Wallow ay sheegeen in aysan dambi gelin, haddana waxaa loo diray baaris dheeraad ah iyagoo wajihi kara xukun xabsi oo aan ka yareyn 5 sano.
Jaziirada Malta oo dhacda bartamaha Mediterranean ayaa marin waxay u noqotay qaxootiga Afrikaan ah ee doonaya in ay u sii talaabaan qaarada Yurub, hase ahaatee, waxaa sanadihii dambe soo wajahay caqabado kala duwan.
Daacish oo weerar dhulka iyo cirka ah lagula eegtay bariga Puntland
Puntland 21.07.2020. 20:15
Jadwalka cusub ee doorashada Koonfur Galbeed lasoo bandhigay
Soomaliya 22.11.2018. 10:12
Khayre oo bedelay mowqifkiisa doorashadda Soomaaliya ee 2020-21
Soomaliya 20.07.2020. 00:55
Abiy Axmed oo Eritrea ku tegay socdaal laga warbixiyey ujeedkiisa
Afrika 18.07.2020. 11:25